Ndi Media na-echebe site na Nnwere Onwe Ikwu na Free Press? | Martech Zone
Ndi Media na-echebe site na Nnwere Onwe Ikwu na Free Press?
Fraịde, Septemba 13, 2013 Fraịde, Septemba 13, 2013 Douglas Karr
Nke a nwere ike ịbụ otu ihe egwu kachasị ụjọ nke egwu egwu na nnwere onwe free na mba a. Ndị Sineti agafewo a iwu ọta mgbasa ozi nke kọwapụtara akwụkwọ akụkọ na ebe otu ndị ọrụ nta akụkọ na-echebe bụ ndị nọ na ya ọrụ nchịkọta akụkọ ziri ezi.
Site na nlele ụkwụ 10,000, ụgwọ ahụ dị ka nnukwu echiche. LA Times na-akpọ ya "Bill iji kpuchido ndị nta akụkọ". Nsogbu a bu asusu di n’isi nke n’enye gọọmentị aka ịkọwa ihe a odeakụkọ bụ, onye a odeakụkọ bụ, ma ọ bụ gịnị nchịkọta akụkọ ziri ezi bụ.
Nke a bụ m. Akwụkwọ akụkọ ụmụ amaala na-etinye nrụgide a na-apụghị imeri emeri na gọọmentị anyị nke na-ekpughe ọtụtụ okwu. O doro anya na e nwere nkwado bi-partisan iji kọwaa ma belata nke onye ma ọ bụ ihe akwụkwọ akụkọ bụ. Onye ọ bụla nke na-eyi egwu igosipụta nsogbu gọọmentị nwere ike tufuo nchebe ya nke ndị nta akụkọ n'okpuru Iwu anyị. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile ga-ahụ nke a n'anya… ọ pụtara na ha nwere ike itinye ndị agha gọọmentị egwu iyi ndị ha na-ekwenyeghị na egwu ha.
Ma ikwere na Edward Snowden ma ọ bụ na ọ bụghị, ozi ahụ ọ wepụtara mere ka ọha na eze mara ihe wee bute iwe nke mmemme ebe NSA na-enyocha anyị. Thisgwọ a anaghị emetụta iwu ihe Snowden mere. N'ụzọ egwu, ọ nwere ike imetụta ma onye nta akụkọ nke wepụtara ya ọ bụ ezigbo ya, ọ bụrụ na ọ bụ nwa amaala America. Na-atọhapụ nkewa ihe nchịkọta akụkọ ziri ezi?
N'agbata afọ 1972 na 1976, Bob Woodward na Carl Bernstein pụtara dịka ndị nta akụkọ abụọ ama ama na America wee bụrụ ndị ebighebi dịka ndị nta akụkọ mebiri Watergate, akụkọ kachasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị America. Emezuru ọtụtụ ozi ha nyere site n'aka onye na-enye nkọwa n'ime White House. Ndi oro ama anam nchịkọta akụkọ ziri ezi?
Ikekwe ndị Republican nọ n'ọchịchị nwere ike ịkọwa na MSNBC ezighi ezi. Ikekwe ndị Democrats nwere ike ikwu na Fox News abụghị nke ziri ezi. Gịnị ma ọ bụrụ na otu onye nta akụkọ na-ekpughe nnukwu asịrị gọọmentị site na erughị akụkọ nchịkọta dị mma? Enwere ike ịtụba ya n'ụlọ mkpọrọ ma lie ya ihere? Ndị a bụ naanị nsogbu dị na mgbasa ozi ọdịnala. Ọ na-akawanye njọ mgbe ị na-eche maka ịntanetị na ịde ederede edemede na Wiki echedoro (ị nwere ike agaghị ekewapụta blogger ma ọ bụ onye nta akụkọ).
Kedu maka mgbe ịmalitere ibe Facebook iji guzogide ma ọ bụ kwado isiokwu. Na-etinye oge dị ukwuu iji kọwaa ozi ịntanetị, kesaa ya na ibe Facebook gị, na-eto eto na ndị na-ege ntị ma na-ewu obodo. I bu onye nta akuko? E chebere ibe Facebook gị? Chịkọtara ozi ịkekọrịta n'ụzọ ziri ezi? Ma ọ bụ… enwere ike ịgba gị akwụkwọ site n'aka ndị mmegide, mechie obodo, yana mechie gị n'ihi na echekwaghị gị n'okpuru gọọmentị. definition.
Site na mgbasa ozi na ntanetị dijitalụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-ekere òkè na-achịkọta ma na-ekerịta akụkọ. Anyị niile kwesịrị ichebe.
Laa mgbe edere Iwu ahụ, onye ọ bụla nọ n'okporo ámá nke nwere ike ịgbazite ma ọ bụ nweta ego obibi akwụkwọ bụ onye odeakụkọ. Ọ bụrụ n’ịlaghachi nyochaa ụfọdụ n’ime ibe akwụkwọ ndị e bipụtara n’oge ahụ, ha dị arụrụala. Ejiri ụgha zuru oke mee ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ghara ịkọwa ha n'ihu ọha iji lie ọchịchọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha. Bụ onye nta akụkọ achọghị nrịgo mmụta… ikwesighi ịsụpe ma ọ bụ ịtọ ụtọ asụsụ ziri ezi! Organizationslọ ọrụ mgbasa ozi apụtaghị ruo ọtụtụ iri afọ ka e mesịrị ka akwụkwọ akụkọ malitere ịzụta obere mgbasa. Nke a dugara na ndị mgbasa ozi mgbasa ozi anyị nwere taa.
Ndị nta akụkọ nke mbụ bụ nnọọ ụmụ amaala na-enweta okwu ahụ. Enwere efu eziomume onye ha lekwasịrị anya, otu ha siri nweta ozi a, maọbụ ebe ha bipụtara ya. Ma 'ndị isi anyị n'obodo anyị' bụ ndị na-abụkarị ndị mwakpo ndị a… họọrọ ịchekwa ikike nke nnwere onwe ikwu okwu na akwụkwọ akụkọ. Ha họọrọ, n'ebumnuche, ọ bụghị ịkọwa ihe ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ, otu esi achịkọta akụkọ, ma ọ bụ ndị si.
Ekwenyere m kpamkpam Matt Drudge na nke a, onye bụ Drudge Report eleghị anya a gaghị echedo ya n’okpuru ụgwọ a. Nke a bụ egwu na-atụ egwu nke gbakwasara fascism, ma ọ bụrụ na imegheghị ya ụzọ.
Tags: ẹphe ekwetaakukonchịkọta akụkọ ziri eziSenate
iPerceptions: Olu nke Onye Ahịa Platform
Bislr: ọgụgụ isi Marketing OS
Sep 13, 2013 na 11: 23 AM
Doug - dị nnọọ elu, enwere m nsogbu n'iji ndọtị m na-echekwa (ọ naghị achọta URL) na enweghị m ike iji Google na ogwe osisi gị n'ihi na ọ "gbadata" peeji ahụ enweghị m ike ịpịgharịa . Ọkụ ịbụ funky.
Sep 14, 2013 na 11: 18 AM
Daalụ maka ịkekọrịta .. Enwere m ezigbo agụ ..